Dowladda Federaalka oo Muqdisho ku casuntay Ahllusunnada Galgaduud – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wafdi ka socda maamulka Ahlu Sunna wal-Jamaaca ee gobollada dhexe ee dalka ayaa gaaray magaalada Muqdisho, halkaas oo ay kulan kula yeelan doonaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Guddoomiyaha golaha talada maamulka Ahlu Sunna, Sheekh Cumar Sheekh Cabdulqaadir Aadan oo hoggaaminaya wafdiga sheegay inay marti-qaad ka heleen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo manta oo sabit kazoo laabanaya dalka Turkiga oo uu maalmo ku jooga booqasho aan rasmi aheyn.
Sheekh Cumar Sheekh Cabdulqaadir ayaa sheegay inay maxadweynaha kala hadli doonaan fulinta heshiiskii Ahlu Sunna iyo dowladda ay gaareen sanad kahor, kaas oo aan wali si dhameystiran loo meel-marin.
Socdaalka wafdiga Ahllusunna ku tageen Muqdisho ayaa kusoo beegmay xilli gobolka Galgaduud ay gaareen ciidamo ka socda Itoobiya oo qeyb ka ah AMISOM, kuwaasoo la filayo iney weeraraan deegaano Alshabaab maamulaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa dooneysa in qorshe mideysan lagu galo howlgalka Alshabaab looga saaro degmooyinka ay maamulaan ee ka tirsan gobolka Galgaduud oo horay mar loogu fashilmay.